ग्वाडालेस्ट, Alicante प्रान्तमा एक सपना शहर यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 28/03/2021 15:30 | गेटवे, España
ग्वाडालेस्ट यस शहरको सब भन्दा अनौंठो र सुन्दर सहर हो Alicante प्रान्त। यो क्षेत्र मा अवस्थित छ मारिना बाजा, जसको राजधानी हो विलाजुयोसा, तर यसको कुनै तटरेखा छैन। यसको विपरित, यो पहाडमा अवस्थित छ र यस क्षेत्रको रूपमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण उचाइहरूले घेरेको छ सिएरा डी आइताना को लहर Xortà.
घोषणा गरियो ऐतिहासिक - कलात्मक जटिल १ 1974 .XNUMX मा, ग्वाडालेस्ट पनि को नेटवर्क को हिस्सा हो स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू। यसको प्रभावशाली महलले प्रभुत्व जमाएको, यसको सेतो घरहरूको साँघुरो सडकबाट टहलिरहेको र यसको संग्रहालयहरूको भ्रमण गर्दा तपाईंलाई अनौंठो अनुभव प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं अझ राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ भने क्यास्टेल डे ग्वाडलेस्ट, यो शहर वास्तवमा भनिन्छ रूपमा, हामी पढ्न जारी राख्न प्रोत्साहित गर्दछौं।
1 ग्वाडालेस्टमा के हेर्ने
1.1 ग्वाडालेस्टको महल
1.2 हाम्रो लेडी अफ एस्प्शनको चर्च
1.3 ओर्डुआको घर
1.5 ग्वाडालेस्टको संग्रहालय
2 Alicante शहर मा के गर्ने
3 के ग्वाडालेस्ट मा खानु
4 शहर कसरी पुग्ने
5 ग्वाडालेस्ट हेर्नका लागि उत्तम समय के हो?
ग्वाडालेस्टमा के हेर्ने
यसको प्रस्तावित प्रभावशाली दृश्यहरूको मजा बाहेक दृष्टिकोणग्वाडालेस्टमा तपाईंसँग रोचक स्मारक सम्पदा छ र अन्य गतिविधिहरू गर्ने सम्भावना पनि छ। हामी तपाईंलाई एलिसन्ट शहरमा के हेर्ने भनेर देखाउँदै छौं।
पनि भनिन्छ सान जोसको महल, ११ औं शताब्दीको पुरानो मुस्लिम दुर्ग हो। शहरको उच्चतम भागमा सञ्चालन गरिएको, मध्य युगको दौडान यसको ठूलो रणनीतिक महत्त्व थियो। यद्यपि दुई भूकम्प र स्वतन्त्रता युद्ध जस्ता द्वन्दले यसको अहिलेको अवस्था झन्डै भग्नावशेषमा पुर्‍यायो। जहाँसम्म, तपाईं अझै पनि उनको अवशेषहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो लेडी अफ एस्प्शनको चर्च
क्याननहरू अनुसरण गर्दै १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित बारोकयसले क्षतिको पनि सामना गर्‍यो जुन यसको गुम्बज र ट्रान्ससेट हटाएर १ 1962 in२ मा यसलाई पुनर्स्थापित गर्न बाध्य पारियो। भित्र तिनीहरू बहुमूल्य खडा हुन्छन् वेदीपीस क्याबिनेटमेकर द्वारा बनाईएको जोस मारिया मोया र चित्रकार डेभिड पास्टर। चर्चको नामले संकेत गरेझैं यसले घोषणा र येशू ख्रीष्टको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो ग्वाडालेस्टमा मुख्य महान भवन हो। यो १1644। को भूकम्प पछि निर्माण गरिएको थियो र ओर्डुआ परिवारको नामाकरण गरिएको छ, जसले शहरमा तीन सय वर्ष शासन गर्नुभयो। यो हालaको मुख्यालय हो नगरपालिका संग्रहालय यसले १ th औं शताब्दीको फर्नीचर, १ XNUMX औं शताब्दीका चित्रहरू, सिरेमिक संग्रह, नक्सा, भिन्टेज फोटोग्राफ र अन्य धेरै चीजहरू प्रदर्शन गर्दछ।
चाखलाग्दो कुरा, ग्वाडालेस्ट टाउन हलको भुईं फ्लोरमा तपाईं १२ औं शताब्दीको पुरानो जेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीलाई स्थानीय संग्रहालयहरूको बारेमा बताउनको लागि अग्रसर गर्दछ किनभने त्यहाँ मध्यकालीन यातना उपकरणहरूको लागि समर्पित एउटा छ।
यस Alicante शहर को अपार सुन्दरता संग, तपाईं को मात्रा द्वारा आश्चर्यचकित हुनेछ जिज्ञासु संग्रहालयहरु आगन्तुकलाई प्रस्ताव गरियो। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं ऐतिहासिक मध्ययुगीन, यसको यातनाजनक वस्तुहरूको साथ र कासा ओर्डुआको पनि। तर अरू पनि आश्चर्यजनक छन्।
यो कुरा हो माइक्रोजियन्ट संग्रहालय, जसमा तपाईं अद्भुत थम्बनेलहरू देख्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि, गोयाको 'मे टु द एक्जीक्युसन अफ मे दुई' चावलको अन्नमा पिनको टाउकोमा बनेको बुलरीring वा स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी सुईको आँखा भित्र छ। सबै कलाकारको रचना हो मानुएल Ussá, विश्व मा एक उत्तम microminiaturists मानिन्छ।
कुनै कम जिज्ञासु छैन बेतलेहेम संग्रहालय र गुड़िया घरहरू जसमा तपाई धेरै पुरानो खेलौना र एक पारिस्थितिक जन्म दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। र उहीको बारेमा भन्न सकिन्छ नुन र मरिच शेकरहरूको संग्रहालय, जसले बीस हजार भन्दा बढि टुक्राहरू समावेश गर्दछ, जस मध्ये केही १ 1800०० वर्ष पहिलेको हो।
अर्कोतर्फ, उत्तिकै सुन्दर छ एथ्नोग्राफिक संग्रहालय, जसले विगतमा ग्वाडालेस्ट उपत्यकाका बासिन्दाहरूको जीवनलाई पुन: स्थापन गर्दछ। सामान्य पोशाक, फर्निचर र भाँडाकुँडाहरू दैनिक प्रयोगको लागि वस्तुहरू बनाउँदछन् जुन यस ठाउँमा प्रदर्शन हुन्छन्।
ओर्डुआ घरको आन्तरिक
अन्तमा, ऐतिहासिक स of्ग्रहालयको स Collection्ग्रह यसले तपाईंलाई एक सुन्दर कोठामा १ 140० मोटरसाइकल र पुरानो कार देखाउँदछ। साथै, तपाईले विगतका अन्य धेरै टुक्राहरू भेट्टाउनुहुनेछ जस्तै सिलाई मेशिन, टेलिफोन, रेडियो र कफि निर्माता पनि।
Alicante शहर मा के गर्ने
यसको स्मारकहरू र संग्रहालयहरूको भ्रमणको साथसाथै एलिसन्ट शहर यसका लागि उत्तम स्थान हो ट्रेकिंग। धेरै मार्गहरू यसको सडकबाट सुरू हुन्छ। उदाहरण को लागी, एक माथि जान्छ Xortà शिखर Cerro डे लस प्याराडोस को माध्यम बाट जाँदै। वा त्यो पनि एउटा नेतृत्व क्यास्टेल डे कास्टेलहरू.
दुबै मार्गहरू सम्म एक कार्यक्रम साझा लोमा डेल ब्लोकन, तर त्यसपछि एक मा जान्छ यू फव्वारा, जबकि अन्य माथि उल्लिखित क्यासल डे कास्टेलहरूमा पुग्छ, जहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ आर्क्स क्षेत्र र गुफा चित्रहरु प्ला डे पेट्राकोस.
के ग्वाडालेस्ट मा खानु
यी तीव्र पर्वतारोहण ट्रेल्स पछि, तपाइँको भूखले काम गर्न सक्दछ। भ्यालेन्सियन समुदायको सहरमा तपाईंसँग रेष्टुरेन्टहरू छन् जुन तपाईंलाई तिनीहरूको विशिष्ट खाना दिन्छ।
ती मध्येका केही छन् शलजम र सिमी संग चामल, the भरिएका मरिच, the खरायो अली अली र बेक्ड तरकारीहरू। बढी बलवान छ ओलेटा डि ब्लाट, जसमा गहुँ, सुँगुर, आलु, प्याज, टमाटर, थिस्टल र गेडाहरू छन्, सबै परम्परागत भाँडामा पकाइन्छन्।
यसको भागको लागि मिन्चो पिज्जा एक प्रकारको हो जुन तरकारी, माछा र अचार छ, जबकि मकै बल तिनीहरू मीटबलहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, यद्यपि तिनीहरूको मासु छैन तर पकाएको आलु, रोटी र अण्डाहरू छन्।
शहर कसरी पुग्ने
यद्यपि त्यहाँ एक छ बस लाइन त्यो Alicante शहर पुग्छ, त्यहाँ पुग्न उत्तम तरिका कार बाट छ। यदि तपाईं बाट यात्रा बेनिडर्म वा Alcoy र Cocentaina बाट, तपाईंले लिनु पर्ने रोड छ CV-70। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं Altea बाट यात्रा, उत्तम मार्ग हो CV-755.
ग्वाडालेस्ट हेर्नका लागि उत्तम समय के हो?
ग्वाडलेस्ट क्षेत्रको प्रकारको मौसम छ भूमध्य, हल्का जाडो र तातो गर्मीको साथ। जहाँसम्म शहर लगभग hundred सय मिटरको उचाईमा र पहाडहरूले घेरिएको हुनाले मौसम अलिक फरक छ। यसैले, यसको जाडो चिसो र गर्मी गर्मी को मामला मा अधिक रमाईलो छ।
त्यसकारण, तपाईको ग्वाडालेस्ट भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय हो गर्मी। थप रूपमा, मध्य अगष्टमा तिनीहरूको उत्सवहरु को सम्मान मा कुमारी को कुमारी, जसको साथ शहर अझ बढी एनिमेटेड छ।
अन्तमा, ग्वाडालेस्ट तपाइँसँग धेरै प्रस्ताव राखिएको छ। यो एउटा सुन्दर सहर हो जुन एउटा चट्टानमा बसालिएको छ र यसको महलले प्रभुत्व जमाएको छ र धेरै उत्सुक संग्रहालयहरू र दर्शनीय स्थलहरू छन्। यदि यी सबैमा तपाइँ एक उत्तम ग्यास्ट्रोनमी थप्नुहुन्छ, तपाइँसँग तपाइँको भ्रमणलाई रमाइलो बनाउन सबै तत्वहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » ग्वाडालेस्ट